Imithetho Engokurhoxa ye-Airbnb
Indlela okusebenza ngayo ukurhoxa xa kuhlalwa
Ababuki zindwendwe bangakhetha iindlela zokurhoxa abafuna ukuzinika iindwendwe eziza kuhlala iintsuku ezingaphantsi kweziyi-28. Ipolisi yokurhoxa Yokuhlala Ixesha Elide isebenza ngokuzenzekelayo xa kuza kuhlalwa iintsuku eziyi-28 nangaphezulu.
Engqongqo Kakhulu Yeentsuku Eziyi-30
Iintsuku Eziyi-60 Zobungqongqo Kakhulu
Ungarhoxa ngaphandle kokubhatala ukuya kutsho kwiintsuku eziyi-24 ngaphambi kwexesha lokungena (ixesha eliboniswe kwi-imeyile yokuqinisekisa).
Emva koko, ukuba urhoxisa ngaphambi kwexesha lokungena, uza kubuyiselwa yonke imali yakho, ngaphandle kwemali yosuku lokuqala neyokusebenzisa uAirbnb.
usuku oluyi-1 ngaphambili
Sin, Sep 30
Ukuze undwendwe lubuyiselwe yonke imali, lumele lurhoxe ubuncinane kwiiyure eziyi-24 ngaphambi kwexesha lasekuhlaleni lokufika (eliboniswe kwi-imeyile yokuqinisekisa).
Hla, Okt 1
Ukuba undwendwe lurhoxisa ngaphantsi kweeyure eziyi-24 ngaphambi kokungena, usuku lokuqala nemali ebhatalelwa ukusebenzisa uAirbnb azibuyiswa.
Mvu, Okt 4
Ukuba undwendwe luyafika luze lukhethe ukuhamba ngaphambi kwexesha, luza kubuyiselwa imali yeentsuku ezisemva kweeyure eziyi-24 lurhoxisile.
Ungarhoxa ngaphandle kokubhatala ukuya kutsho kwiintsuku eziyi-5 ngaphambi kwexesha lokungena (ixesha eliboniswe kwi-imeyile yokuqinisekisa).
Emva koko, ukuba urhoxisa ngaphambi kokungena, uza kubuyiselwa i-50% yemali yakho, ngaphandle kwemali yosuku lokuqala neyokusebenzisa uAirbnb.
Iintsuku eziyi-5 ngaphambili
Caw, Sep 26
Ukuze undwendwe lubuyiselwe yonke imali, lumele lurhoxe ubuncinane kwiintsuku eziyi-5 ezipheleleyo ngaphambi kwexesha lasekuhlaleni lokufika (eliboniswe kwi-imeyile yokuqinisekisa).
Ukuba undwendwe lurhoxisa ngaphantsi kweentsuku eziyi-5 ngaphambi kokungena, usuku lokuqala kunye ne-50% yazo zonke ezinye iintsuku emva koko, nemali ebhatalelwa ukusebenzisa uAirbnb, azibuyiswa.
Ukuba undwendwe luyafika luze lukhethe ukuhamba ngaphambi kwexesha, luza kubuyiselwa i-50% yemali yeentsuku ezisemva kweeyure eziyi-24 lurhoxisile.
Undwendwe lungarhoxa ngaphandle kokubhatala kwiiyure eziyi-48 emva kokubhukisha, ukuba nje lurhoxa ubuncinane kwiintsuku eziyi-14 ngaphambi kwexesha lokufika (ixesha eliboniswe kwi-imeyile eqinisekisayo)
Emva koko, iindwendwe zinokurhoxa kwiintsuku eziyi-7 ngaphambi kwexesha lokufika zize zibuyiselwe i-50% yemali yosuku kunye neyokucoca, kodwa ingabuyiswa eyeenkonzo
Iintsuku eziyi-14 ngaphambi
Iiyure eziyi-48 emva kokubhukisha
Ukuze undwendwe lubuyiselwe imali yazo zonke iintsuku, lumele lurhoxe zingaphelanga iiyure eziyi-48 ubuncinane kwiintsuku eziyi-14 ezipheleleyo ngaphambi kwexesha lasekuhlaleni lokufika (eliboniswe kwi-imeyile yokuqinisekisa).
Iintsuku eziyi-7 ngaphambili
Ukuze undwendwe lubuyiselwe i-50% yemali yosuku, lumele lurhoxe kwiintsuku eziyi-7 ezipheleleyo ngaphambi kwexesha lasekuhlaleni lokufika (eliboniswe kwi-imeyile yokuqinisekisa), kungenjalo aluzukubuyiselwa mali. Ukuba kubhatelwe i-50% yemali yokubhukisha, ayizukubuyiswa, ibe yona i-50% eshiyekileyo iza kuyekwa.
Hla, Okt 8
Ukuba undwendwe lurhoxisa kwiintsuku ezingaphantsi kweentsuku ezi-7 ngaphambili okanye lugqiba ekubeni luza kuhamba kwangoko emva kokubhalisela ukungena, iintsuku ezingasetyenziswanga azibuyiselwa mali.
Iindwendwe zinokurhoxa ubuncinane kwiintsuku eziyi-30 ngaphambi kwexesha lokufika zize zibuyiselwe i-50% yemali yosuku kunye neyokucoca, kodwa ingabuyiswa ebhatalelwa ukusebenzisa uAirbnb
Imali ebhatalelwa ukusebenzisa uAirbnb ayibuyiselwa
Le polisi ifumaneka kuphela kubabuki zindwendwe abakonekthe nge-software
Iintsuku eziyi-30 ngaphambili
Tha, Sep 1
Ukuze undwendwe lubuyiselwe i-50% yemali yosuku, lumele lurhoxe kwiintsuku eziyi-30 ezipheleleyo ngaphambi kwexesha lasekuhlaleni lokufika (eliboniswe kwi-imeyile yokuqinisekisa).
Ukuba undwendwe lurhoxisa sekushiyeke iintsuku ezingaphantsi kweziyi-30, ayizukubuyiselwa imali yeentsuku ezibhukishiweyo.
Ukuba undwendwe luyafika luze lukhethe ukuhamba kwangoko, aluzukuyifumana imali yeentsuku ezishiyekileyo.
Iindwendwe zinokurhoxa kwiintsuku eziyi-60 ngaphambi kwexesha lokufika zize zibuyiselwe i-50% yemali yosuku kunye neyokucoca, kodwa ingabuyiswa ebhatalelwa ukusebenzisa uAirbnb
Iintsuku eziyi-60 ngaphambili
Mvu, Aga 2
Ukuze undwendwe lubuyiselwe i-50% yemali yosuku, lumele lurhoxe kwiintsuku eziyi-60 ezipheleleyo ngaphambi kwexesha lasekuhlaleni lokungena (eliboniswe kwi-imeyile yokuqinisekisa).
Ukuba undwendwe lurhoxisa sekushiyeke iintsuku ezingaphantsi kweziyi-60, ayizukubuyiselwa imali yeentsuku ezibhukishiweyo.
Isebenza ngokuzenzekelayo xa kubhukishwe iintsuku eziyi-28 nangaphezulu
Inokubuyiselwa yonke imali yokubhukisha kwiiyure eziyi-48 emva kokuba ukubhukisha kuqinisekisiwe, ukuba nje kurhoxiswa ubuncinane kwiintsuku eziyi-28 ngaphambi kokungena (ngo-3:00 Emva Kwemini ngexesha lasekuhlaleni lendawo ekuyiwa kuyo ukuba alichazwanga)
Emva kweeyure ezingaphezu kweziyi-48 emva kokubhukisha, iindwendwe zingarhoxisa ngaphambi kwexesha lokungena zize zibuyiselwe yonke imali, ngaphandle kweyeentsuku eziyi-30 zokuqala neyokusebenzisa uAirbnb
Ngaphambi kweentsuku eziyi-28
Ukuze ubuyiselwe yonke imali, kufuneka urhoxe kwiiyure eziyi-48 ubhukishile, okungenani kwiintsuku eziyi-28 ngaphambi kwexesha lokufika kuloo ndawo (okanye ngo-3: 00 PM xa kungacaciswanga) ngosuku lokungena.
Ukuba undwendwe lurhoxisa ubhukisho ngaphambi kosuku lokufika, inyanga yokuqala yokubhukisha ibhatalwa yonke kumbuki zindwendwe luze lungabuyiselwa nto undwendwe.
Caw, Okt 31
Ukuba undwendwe lurhoxisa ubhukisho ngexesha elihleli ngalo, undwendwe lumele lusebenzise isixhobo sokutshintsha kwi-intanethi ukuze luvume umhla omtsha wokuhamba. Kungakhathaliseki nokuba loluphi usuku olukhethiweyo lokuphuma, undwendwe kunyanzelekile ukuba lubhatale umbuki zindwendwe iintsuku eziyi-30 emva kosuku lokurhoxa, okanye ukuya kusuku lokugqibela lobhukisho lokuqala londwendwe ukuba iintsuku ezishiyekileyo zingaphantsi kweentsuku eziyi-30.
Qaphela: Iindwendwe azisayi kuyibuyiselwa imali yenkonzo yakwa-Airbnb ukuba sezisele ziyibuyiselwe kayi-3 imali yenkonzo kwiinyanga eziyi-12 ezidlulileyo okanye ukuba iintsuku ezizirhoxisayo ngoku ziyafana neentsuku ezizibhukishe kwenye indawo.
Imibuzo edla ngokubuzwa
Ngaba iindwendwe ziyayibuyiselwa imali yokucoca?
Imali yokucoca ibuyiswa ukuba undwendwe lurhoxe ngaphambi kwexesha lokungena.
Ngaba iindwendwe zinokuyibuyiselwa imali ukuba indlu ayiyo lento beziyilindele?
Siza kunceda iindwendwe ukuba zifumane enye indawo yokuhlala okanye sizibuyisele imali ukuba akungeneki endlini, imdaka, ayikhuselekanga, okanye ukuba kukho isilwanyana umbuki zindwendwe angakhange asifake kwiinkcukacha zendlu. Funda okungakumbi
Zingakwazi ukuyibuyiselwa yonke imali yazo iindwendwe xa umbuki ziindwendwe engakwazi okanye engafuni kulungisa ingxaki?
Iindwendwe kufuneka qhagamshelana nathi zingekapheli iiyure eziyi-24 zokufumana ingxaki. Kwiimeko ezifanelekileyo, siza kurhoxisa ukubhukisha size sibuyise imali.
Kuza kuthini ukuba undwendwe kufuneka lurhoxise ngenxa yemeko yongxamiseko?
Singakwazi ukuyibuyisa imali ukuba undwendwe kufuneka lurhoxe ngenxa yemeko yongxamiseko. Funda okungakumbi
Kuthatha ixesha elingakanani ukufumana imali oyibuyiselweyo?
Siyibuyisela kwangoko imali xa kurhoxiswa kwaye idla ngokubonakala kwiintsuku eziyi-3 ukuya kweziyi-5, kodwa ngamanye amaxesha inokuthatha iintsuku eziyi-15 ngaphambi kokuba ibonakale kwindlela yokubhatala obuyisebenzisile. Kwamanye amazwe, njengaseBrazil naseIndiya, kungade kuthathe iinyanga eziyi-2 ukuba ibonakale imali oyibuyiselweyo.
Ndithini ukuba andiqinisekanga ukuba ithini ipolisi yam yokurhoxisa okanye ayiveli apha?
Ngamanye amaxesha sikhe sivumele ababuki zindwendwe bakhe basebenzise iipolisi ezintsha esisazivavanyayo. Soloko ujonga iinkcukacha zakho zokubhukisha—ziyabonakala iipolisi zokurhoxisa ezisebenza kukubhukisha kwakho.